၂၁ ကြိမ်မြောက် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား
ဤဆောင်းပါးသည် လက်ရှိကျင်းပနေသော အားကစားနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် ပြိုင်ပွဲအား မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေမှုပေါ်မူတည်ပြီး အချက်အလက်များ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ ကနဦးသတင်းတင်ပြချက်များ၊ ရမှတ်များ သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် စိတ်ချယုံကြည်ဖွယ်မရှိသော အချက်အလက်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၏ နောက်ဆုံးတည်ဖြတ်မှုသည် လက်ရှိနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။ (Learn how and when to remove this template message)
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာမြို့များ အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှု ကြေငြာခြင်းကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်မြို့ကို ၁၁ မြို့ထိ လျော့ချခဲ့ပြီး အားကစားကွင်းများကိုလည်း ၁၂ ကွင်းအထိ လျော့ချခဲ့ရာ ကရာ့စနိုဒါးနှင့် ယာရိုစလဗာလ်မြို့တို့သည် အပြီးသတ်စာရင်းမှ ကျန်ခဲ့သည်။ ထိုအားကစားကွင်း ၁၂ ကွင်းတွင်လည်း အားကစားကွင်း ၃ ကွင်း(လုရှ်နီကီ၊ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်နှင့် ဆိုချီ)တို့မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံရုံသာဖြစ်ပြီး ကျန် ၉ ကွင်းမှာ အသစ်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၁၁.၈ ဘီလီယံအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဗော်ဂါဂရတ်မြို့: ဗော်ဂါဂရတ် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ဗော်ဂါဂရတ်မြို့၏ ပင်မအရီနာကို အမိမြေမှခေါ်သံ ရုပ်ထုကြီးအောက် ယခင်က ဖြိုချခဲ့သော ဗဟိုအားကစားကွင်းနေရာတွင်ပင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးအပ်နှံ့ခဲ့သည်။
ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့: ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၃၅,၀၀၀)။ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့၏ ဗဟိုအားကစားကွင်းအား ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ် ၃၅,၀၀၀ ဝင်ဆံသည့် အားကစားကွင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၈ ရုရှားနိုင်ငံ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ ၁ ဇွန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်လက်ခံခဲံသည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ရုရှားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်မှာ စံချိန်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းပြီးဆုံးရာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပသူတို့သည် လျှောက်လွှာပေါင်း ၁၇၇,၀၀၀ ခု လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၇,၀၄၀ ဦးအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပရာ မြို့ ၁၁ မြို့တွင် မြို့တော်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၈,၀၀၀ ဦးထက်ပို လိုအပ်မည်ဖြစသည်။ ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ တက္ကသိုလ် ၁၅ ခုကို အခြေပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းစင်တာ ၁၅ ခုဖွင့်လှစ်ကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင်ပေးခဲ့သည်။ ဦးစားပေးအနေဖြင့် အဓိကနေရာများတွင် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတက်ကျွမ်းသူနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများအား ဦးစားပေးနေရာချပေးခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ရုရှားနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အခြားသောနိုင်ငံသားများ ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။
ပွဲချိန်ဇယားအပြည့်အစုံကို ဖီဖာမှ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။(ရှုံးထွက်ပွဲများမပါဝင်ပေ။ ၎င်းပွဲချိန်များကို နောင်တွင်မှ အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်မဲနှိုက်ခဲ့ခြင်းအရ ရှုံးထွက်ပွဲများကို ဖီဖာမှ အချိန်ညှိပေးခဲ့ကြသည်။ ရုရှားအသင်းသည် အုပ်စုအဆင့်၏ A1 နေရာတွင် ရှိသဖြင့် အဖွင့်ပွဲကို မော်စကိုမြို့ရှိ လုရှ်နီကီအားကစားကွင်းတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းနှင့် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလုရှ်နီကီအားကစားကွင်းတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၁ ၌၊ ဗိုလ်လုပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၌ အသီးသီးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ ကရဲ့စတော့ဗ်စကီးအားကစားကွင်းတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၌လည်းကောင်း၊ တတိယလုပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့၌လည်းကောင်း အသီးသီးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုကြေးငွေများကို အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Ethics: Executive Committee unanimously supports recommendation to publish report on 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process" (Press release). FIFA.com. 19 December 2014. Archived from the original on 29 March 2015. Unknown parameter |df= ignored (help)
↑ Набор волонтеров на ЧМ-2018 установил новый рекорд Чемпионатов мира (in ru)။ FIFA (17 January 2017)။
↑ Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ - Волонтерская программа: F.A.Q. - FIFA.com (in ru)။ FIFA.com။
↑ Match report – Group E – Switzerland v Costa Rica။ Fédération Internationale de Football Association (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ FIFA Council decides on key steps for the future of international competitions။ FIFA (16 March 2018)။
↑ Russian Railways announced as an Official European Supporter of the 2018 FIFA World Cup™။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၈_ဖီဖာ_ကမ္ဘာ့ဖလား&oldid=519487" မှ ရယူရန်
၉ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၉:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၉:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။